Sọpụrụ 30S na Kirin 820 5G ndị ọrụ ugbu a: atụmatụ, ọnụahịa na ndị ọzọ | Gam akporosis
Emebere Honor 30S ma bido Kirin 820 5G ọhụrụ
Emepere Honor 30S ọhụụ, ọnụ nke na-eweta 5G njikọta n'etiti etiti na Mbido n'akụkụ Kirin 820 5G, Ihe nhazi ohuru nke Huawei nke nwere nodu nke 7 nm.
Honor 820 5G na-ekwe nkwa ihe leaked n'oge gara aga. Anyị na-eche ihu na mkpanaka nwere atụmatụ adịchaghị nke nwere ihu ngebichi na igwefoto quad, akụkụ abụọ kachasị pụta na nke ọhụrụ a.
1 Njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke Honor 30S
Njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke Honor 30S
Ngwaọrụ a na-eji ihe a nnukwu ihuenyo na-etu ọnụ a diagonal nke 6.5 sentimita. Teknụzụ nke a bụ IPS LCD, ebe mkpebi ọ na - eweta bụ FullHD + nke 2,480 x 1,080 pikselụ. Na mgbakwunye, dị ka anyị na-ekwu, o nwere ntụpọ dị n'akụkụ aka ekpe elu nke nwere igwefoto selfie 16 MP nwere oghere f / 2.0. N'otu oge ahụ, bezels ndị na-ejide ya dị obere, nke na-enyere aka mee ka ọmarịcha mma ya bụrụ usoro.
Enyere akụkụ nke ekwentị dị ka 161,31 x 75 x 8,8mm, ebe ịdị arọ ya bụ gram 190. Ahụ a na-eje ozi dị ka akpa maka ọhụrụ Kirin 820 5G, octa-core mobile platform nke nwere okpukpu anọ ARM Cortex A76 na anọ ndị ọzọ ARM Cortex A55 na-arụ ọrụ na oke kachasị nke 2.36 GHz.
Na ajụjụ, isi otu nke SoC dị ka nke a: 1x Cortex-A76 na 2.36 GHz + 3x Cortex-A77 na 2.22 GHz + 4x Cortex-A55 na 1.84 GHz; ha nile dabere na ije 64-bit. A ga-agbakwunye nke a n'eziokwu na ọ nwere Mali G57 isi isi GPU nke na-anọchite anya mmụba arụmọrụ 38%, ma e jiri ya tụnyere nke Mali G52 GPU nyere, yana arụmọrụ ọgụgụ isi dị elu nke 73%, dabere na Kirin 810 .
Ejiri chipset jikọtara ya 8 GB Ram na 128/256 GB n'ime oghere dị n'ime, ya mere enwere nhazi ncheta abuo di. Na mgbakwunye na nke a, enwere ike ịgbasa ROM site na iji kaadị NM (kaadị Huawei SD), ebe batrị nke na-enye ekwentị ike bụ batrị 4,000 mAh nke nwere teknụzụ na-agba ọsọ ọsọ nke 40 W site na ọdụ USB-C.
N'aka nke ọzọ, gbasara ngalaba foto, enwere sistemụ igwefoto quad nke 64 MP kachasị na-eduzi ya na oghere f / 1.8. Ihe atọ ndị ọzọ na - eso ụzọ na akụkụ anọ nwere akụkụ 8 MP nke nwere oghere f / 2.4, telephoto 8 MP (f / 2.4) na ngwa anya 3X na mbugharị ngwugwu 5X, yana ihe mmetụta 2X macro. MP na f / 2.4 oghere maka ezigbo foto.
Onye na-agụ akara mkpịsị aka aka adịghị na azụ azụ nke Honor 30S ọhụrụ, mana ọ naghịkwa n'okpuru ihuenyo ebe ọ bụ na nke a bụ teknụzụ IPS LCD ma, dịka ị maara, ọ naghị akwado ya. Nke a, na aka nke ọzọ, enịm ke n'akụkụ aka nri.
Enwere igwe isi okwu 3.5mm na sistemụ arụmọrụ nke dị maka etiti etiti dị gam akporo 10 n'okpuru MagicUI 3.1.1 na-enweghị ọrụ ekwentị mkpanaaka Google. N'aka nke ya, na usoro nke njikọta njikọ, enwere ihe ndị a: 5G, Wi-Fi band abụọ, Bluetooth 5.1 na GPS.
EGO HONA 30S
IKIRU 6.5-anụ ọhịa IPS LCD na FullHD + mkpebi nke 2.480 x 1.080 pikselụ
Nhazi Kirin 820 5G na Mali G57 isi isi GPU
Gbanwee CAMERA Ugboro anọ: 64 MP (isi ihe mmetụta) + 8 MP (obosara ya) + 8 MP (telephoto) + 2 MP (nnukwu)
N'ihu CAMERAA 16 MP
OS Android 10 n'okpuru nhazi nhazi nke MagicUI 3.1.1
UMUAKA 4.000 mAh kwadoro 40 W ngwa ngwa
Njikọ 5G. 4G. Bluetooth WiFi. USB-C. GPS
Emego Honor 30S na China, yabụ ọ dị naanị maka ịhazi ebe ahụ n'oge ahụ. Nhọrọ na ọnụahịa dịnụ bụ ndị a:
Sọpụrụ 30S (8/128 GB): Yuan 2,399 (~ euro 306 ma ọ bụ dollar 338)
Sọpụrụ 30S (8/256 GB): Yuan 2,699 (~ euro 344 ma ọ bụ dollar 380)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Emebere Honor 30S ma bido Kirin 820 5G ọhụrụ
Honor Play 9A bụ ọrụ: 6,3 "panel na nnukwu batrị ikike
Super mmepụta oyiri bụ ọhụrụ emereme egwuregwu na ndò nke Archero